Dhigashada Maydho Baby: Sida loo sameeyo Dhigashada Maydho gaar Baby
> Resource > Talooyin > Sida loo sameeyo shakhsiga Baby Dhigashada Maydho
Roob Baby waa xisbiga xaflad lagu maamuusayo ilmaha cusub dhashay ama ilmaha inuu yimaado a. Waxaa caadi ah in dalalka reer galbeedka sida Mareykanka, Canada, UK, iyo xataa Hindiya. Sida caadiga ah, kaliya haweenka ka qeyb gali doona xaflad qubeyska ilmaha. Ma jiro nin waxaa lagu casuumay. Sidaas, sida xisbiga haweenka, qubeyska ilmaha la mid aad shakhsi karo oo u gaar ah, oo dhan ku soo bilowday ka marti qubeyska ilmaha .
Marti Roob Baby waxaa inta badan ka marto card sameeyey, iyo qaabka ay ku xidhan tahay arrimuhu dhaqanka, xilli, shakhsiyadda xirma ee iyo xitaa dadka loo yeedhay. Baby marti Roob haya- noqon karaan mid caadi ah ama lagu qoslo. Haddii ereyo aad daunts, ha ka cabsan in akhri ilmaha lagu marti Roob ereyo si aad u waxyoonay, ama wax laga beddelo, si loo waafajiyo baahidaada.
Maydho Baby Dhigashada haya-
Baby marti Roob haya- noqon kartaa in ka badan qofka badan design laftiisa. Haddii aad u maleyso inay adag tahay in la abaabulo erayada ama aad ku fiican tahay ereyo ma aha, wax yar ka gudbin qubeyska ilmaha tusaalooyin haya- martiqaad ka hooseeya, iyo in la beddelo ama iyaga isku darsamaan si ay adiga kuu gaar ah mid ka mid ah. Labada ilmaha lagu marti Roob haya- u dhashay wiil, gabar iyo mataano ilmaha lagu daro.
Wixii Baby Boy:
Marka ilmuhu dhasho,
sidaa darteed waa hooyo.
Waad lagu casuumay inuu ka
Maydho Baby u Jacky Thomas
Carla & Maka Thomas
si Carla 111-000-5555 Wixii Baby Girl: Aan iyada huwiyo, jacaylka Waxaad jirif lagu casuumay inuu ka Maydho Baby cisaynayo oo Megan Smith on Sunday, March 10th at 5 pm 8332 Leesburg Pike Vienna, Virginia ka xun oo kaliya in ay Carla at 111 -2222 Wixii Twin Baby: Laba nooc oo gacmaha ! labo nooc oo indhaha Mataano yihiin sida lama filaan ah aad u faraxsan! Fadlan ku soo biir Maydho Twin Baby ah cisaynayo oo Jacky iyo Berry Givens Saturday, 24-kii June ee 11:00 am Clyde ee Restaurant 8332 Leesburg Pike Vienna , Virginia
Hadda waa in aad rabto in aad casuumaad qubeyska ilmaha ee aad leedahay. Halkan DVD Muqaal dhise si weyn lagu talinayaa. Waxaad software si aad u tijaabiso soo bixi kartaa!